भ्रष्टाचारको आरोप लागेका चुडामणि पहिलो नम्बरको सहसचिव ! – BRTNepal
भ्रष्टाचारको आरोप लागेका चुडामणि पहिलो नम्बरको सहसचिव !
बिआरटीनेपाल २०७५ पुष १० गते ८:४८ मा प्रकाशित
कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जेष्ठ कर्मचारीहरुको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले सुरुमा प्रशासन सेवातर्फका सहसचिवहरुको नामावली सार्वजनिक गरेको हो । तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगमा रहँदा अनधिकृत रुपमा भ्याट छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका चुडामणि शर्मा पहिलो नम्बरमा छन् । आन्तरिक विभागको महानिर्देशक हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएका शर्मा ६१ दिन हिरासतमा बसेका थिए ।
अख्तियारले कर छुट प्रकरणमा शर्मा्विरुद्ध ३ अर्ब बिगो दावी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीविरुद्ध अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा पनि अख्तियारले विशेष अदालतमा अर्को मुद्दा दायर गरेको छ ।
तत्कालिन कर फर्छ्यौट आयोगको सदस्यसचिव रहेका शर्मामाथि भ्याट छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले छानबिन गरेका शर्मा अतिरिक्त समूहमा छन् । शर्मापछि दोस्रो नम्बरमा रामप्रसाद थपलिया, तेस्रो नम्बरमा वीरेन्द्रकुमार यादव, चौथो नम्बरमा दीपक सुवेदी र पाँचौं नम्बरमा चन्द्रमान श्रेष्ठ छन् । २२५ औं नम्बरमा सामाजिक विकास मन्त्रालय धनगढीमा कार्यरत जुम्लाका गोगनबहादुर हमाल छन् ।
सरकारले कर्मचारीहरुको समायोजनको मुख्य आधार जेष्ठतालाई मानेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले सुरुमा सहसचिवस्तरका कर्मचारीहरुको सूची सार्वजनिक गरिएको र अन्य पदका कर्मचारीहरुको पनि क्रमशः सूची सार्वजनिक गर्दै जाने बताउनुभएको छ ।
देउवा नेतृत्वको सरकार अलोकतान्त्रिक– शेखर कोईराला
राष्ट्रसङ्घमा नेपाल -अल्पविकसित देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अधिक सहायता अपरिहार्य
जन आन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंहको २४ औँ स्मृति दिवस मनाइयो
संविधान दिवसको कार्यक्रममा जसपा सहभागी नहुने, त्रुटीपूर्ण प्रावधानको विरोध गर्न आह्वान
मलेसियाबाट एकैदिन ६ शव र १५ अस्तु नेपाल ल्याइयो
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा ५ सय २३ कैदीको माफी मिनाह, ८ कैदीको सजाय माफी
नेपालमा थप १ हजार ६६ जनामा कोरोना पुष्टि, १२ सय ३४ जना संक्रमणमुक्त
ऊर्जामन्त्री भुसालसँग यूएईका राजदूत अल–क्वाबीको शिष्टाचार भेट
चीनबाट थप ४४ लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप नेपाल आयो